Anoshuva munyori anofa asati aburitsa bhuku rake rekutanga | Zvazvino Zvinyorwa
Anoshuva munyori anofa asati aburitsa bhuku rake rekutanga
Anoshuva munyori akarara akafa mumba make kwemwedzi mina apo tsamba yakabva kumupepeti achitambira bhuku rake rekutanga akarara akamirira asina kuverengwa padhoo.
Aimbova mudzidzisi Helen Gradwell akawanikwa akafa kumba kwake kuHeaton, Manchester, muna Kubvumbi apfuura apo vavakidzani vakakwidza alarm. Tsvagiridzo yakaitwa yakataura kuti mukadzi ane makore makumi matatu nemapfumbamwe akasurukirwa mukadzi angangodaro akafa mwedzi ingangoita ina muviri wake usati wawanikwa, pavakawana kushongedzwa kwakasiyana kweKisimusi mukati mevhu rese uye imbwa dzavo mbiri dzakawanikwa dzakafa mukamuri imwechete.
1 Njodzi yekufa kubva pakuwedzeredza
2 Akanyora bhuku rake rekutanga muchivande
3 Pakanga pasina humbowo hwekuzviuraya
Njodzi yekufa kubva pakuwedzeredza
Mushakabvu, Helen Gradwell, akawanikwa pasi peimba yake akatarisana pasi uye mune yepamusoro mamiriro ekuora. Akange akapfeka mapyjamas uye zvinofungidzirwa kuti aive akarara pasofa nekuti paive ne duvet uye mutsago.
Zvinotaridza kuti mukadzi akatambura nemagraines akakomba, migraines yakanyanya zvekuti inogona kukonzera kuoma mitezo kune rimwe divi remuviri wake. Nyanzvi yezvirwere, Jonathan Pearson akati zvaigona kuitika kuti munyori anoshuvira akapfuura zororo pakurapa marwadzo pamigraines yake inorwadza.
Nyanzvi yezvirwere yakatiwo kuora kwepamberi kwemuviri kwakaita kuti zviome kunyatsoziva kuti akafa sei asi iye zvakare akataura kuti zvinoita sekunge pasina humbowo hwekurohwa nemumwe munhu. Toxicology bvunzo dzakawana mwero wepamusoro wekutapudza kurwadziwa mumuviri wake, zvichisimbisa kufungira kwachiremba.
“Ndihwo chete humbowo hwatinahwo hwechimwe chinhu chisina kujairika chinogona kutsanangura kufa kamwe kamwe. "Ndinobvuma kuti haina kukwana asi pachiyero chezviitiko ndiyo humbowo hwakanakisisa hwatinahwo hwekutsanangura rufu."
Akanyora bhuku rake rekutanga muchivande
Helen Gradwell akange adzidzira kuve mudzidzisi asi akamanikidzwa kusiya basa rake paakatanga kutambura nemagraines. Nekuda kweshanduko iyi, akachinja makirasi muchikoro cheakazvimirira ezvidzidzo zvevana vakasiyana uye zvakare anga achinyora novel rake muchivande.
Helen aive asina kuroora uye aigara ega. Vemhuri yake vakati aive azviparadzanisa navo saka havana ruzivo rwekuti anga achinyora.
Mushure mekuferefetwa, amai vokurera, Bronwen Gradwell, vakarondedzera kuti Gradwel akanga atumira zvinyorwa uye zvitsauko zvitatu zvekutanga zvebhuku rake - iyo mhuri yake yaanotenda kuti akapedza - kune muparidzi weLondon.
“Tinoziva kuti panofanira kunge pane imwe nzvimbo. Kana tikachiwana tinoda kuiburitsa uye ipai mari inowanikwa kuzvipo zvinobatsira mhuka. "
"Mipiro kubva kumariro ake yakaenda kunochengeterwa mhuka kwaireva zvakawanda kwaari, yaive nyika yake."
Pakanga pasina humbowo hwekuzviuraya
Assistant Coroner Timothy Brennand vakapinda mutongo wakashama vachiti hapana humbowo hunoratidza kuti mushakabvu anga achida kuzviuraya. Akataura zvakare kuti anga achangotenga mbatya nyowani uye kuti haana kusiya chero zvinyorwa asi zvaakaita chaizvo. kufunga kuti kufa kwake kwaive netsaona kwaive kuda kwake imbwa dzake mbiri.
"Kunzwisisa kwangu, angadai asina kuisa hupenyu hwembwa dzake munjodzi."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Anoshuva munyori anofa asati aburitsa bhuku rake rekutanga
Anne Granger akadaro
Chinhu chakashata, hapana munhu akacherekedza kufa kwake. Ini ndaive mudiki kwazvo uye zvaisafanirwa kuve nyore kurarama neiya migraines. Ndinovimba vanodhinda basa ravo uye nekudaro, zvirinani, hazviwire mukukanganwa.
Pindura Ana Granger
Mashoko anovhundutsa. Hupenyu hutsinye sei. Hakasi kekutanga kunzwa kana kuverenga kuti chitunha chemumwe munhu chakawanikwa mushure memwedzi yekufa vasina vavakidzani vavo vaona. Zvinoitika neimwe frequency. Icho chimwe chezviso zvinovava zvevanhu vedu.
Musikana murombo, ndinomunzwira tsitsi nembwa dzake. Mukadzi ane tsika, anonzwisisa, ane hunyanzvi, munhu kwaye (ichi ndicho chinhu chakakosha kupfuura zvese)… Haana kufanirwa kupera seizvi.
Angave kushamisika kunofadza sei dai anga ari mupenyu pakauya tsamba yemupepeti. Ndinoshuva dai ndakafarira kubudirira kwako.
Hameno kuti chii chaizoitika kwaari kuti asiyane nemhuri yake. Zvino zvandinofunga nezvazvo, nhau dzinoita nyaya kana novel.
Kune rimwe divi, hama dzavo vane nyore kuwana basa: nekunyorera kukero yeimba yekutsikisa yeLondon iyo inowanikwa mune yekudzosa kero yetsamba yakaonekwa padhoo kana kufona nhare, ndizvozvo.
Kwaziso yekunyora. Kubva kuOviedo.
PS: zvirinani aive nerufu rwunofadza, asina kurwadziwa.
Zvinyorwa senzira yekushandura nyika
Rwira kuponesa imba yaJames Baldwin